Nitsabo ireo mahantra izy ary nanampy ireo kamboty mba ho afa-mihoitra irery eo amin'ny fiainana. Nenjehina noho ny maha kristianina azy anefa i Tatiana ka nohelohina hofaty. Nahantona izy, naboridana sy norangotina tamin'ny fihogo vy ny vatany, nosolaina ny volony ary notapahana avy eo ny lohany tamin'ny taona 226.
Noho ny finiavan'i Tatiana no nampalaza azy tao Russie. Voalaza fa i Masimbavy Tatiana na i Tatienne irery no nahay nampiaina tsara ny zava-boaary rehetra mandritra ny hatsiaka mairifirin'ny volana janoary. I Masimbavy Tatiana no mpiaro ny Oniversiten'i Russie satria ny 12 janoary 1724 no nanorenan'i Pierre le Grand ny Académie des Sciences tao Saint-Petresbourg. Ny 12 janoary 1755 ihany koa ny Impératrice Elisabeth Petrovna no nanorina ny Oniversite tao Moscou. Mandritra ny fankalazana io olomasina io dia manao fety ny mpianatry ny Onivesrite, vory lanona izy ireo, mifaly sy miala voly.